Lionel Messi anokunda wechitanhatu Ballon d'Or - VIDEO - Tamban RELAY
Lionel Messi anokunda wechitanhatu Ballon d'Or - VIDEO
By TELES RELAY On Dec 22, 2019
Nhabvu nhabvu Lionel Messi akakunda Balen d'Or Mubairo weakanakisisa mutambi wegore regore ra2018-19. Ichi chinyorwa chebasa raMessi mubayiro wechitanhatu muBalen d'Or. Messi akahwina mubairo uyu kekutanga kubvira 2015. Akakwanisa kukwidza zvibodzwa makumi matanhatu nemakumi mana zvekirabhu uye nyika muna 54-2018. Kuita kwake kwekunakisa kwakabatsira Barcelona kukunda zita reSpanish Liga Soccer League. Messi akasiya Virgil van Dijk weLiverpool. Inotaridzwa mberi Cristiano Ronaldo wePortugal uye maYuvents apedza chechitatu mumhanyi wemutengo.
Iyi vhidhiyo yakatanga kuonekwa pa https://www.youtube.com/watch?v=OZb2jeKHiJA
Android 9angelina joliearafataubameyangBallonbhora regoridhe 2018beyonce knowlesbrad pitt
India: RJD-inotungamirwa bandh kurwisa CAA paralyzes Bihar, 1 vasungwa | India News
Tsoka: Seri Jean-Michaël anoda kubva kuTurkey kune muhoro usina kubhadharwa
Prince Harry naMegan vakadzokera kuUK kwe MEGXIT - VIDEO
RUPENYU: Zidane de Madrid inofunga nezve UCL kuenzana neMan City ye…
Irwa nekenza: "Tichazviwana takatarisana nemamiriro ehupfumi" ..